«Ahoana moa izany?» -
AccueilTresaka«Ahoana moa izany?»
«Ahoana moa izany?»
12/02/2018 admintriatra Tresaka 0
Mbola mitàna ny sain’ny maro ny raharaha Houcine Arfa ary maro ny adihevitra manodidina izany nanomboka tamin’ny fomba nandosirany teo am-pelatanan’ireo mpiandry fonja, ny fomba nivoahany ny sisintanin’i Madagasikara, sns.
Fa misy adihevitra iray koa anefa tsy dia nisy niresaka firy tao anatin’izany rehetra izany dia ny antsoina amin’ny teny vahiny hoe « recel d’informations » izay heloka henjehan’ny lalàna eto Madagasikara hatrany ivelany raha tsy hiresaka afatsy ny ao Frantsa fotsiny ihany. Inona moa no tiana ambara amin’izany?
Ahoana tokoa moa izany ny fipetraky ny lalàna amin’ity resaka Houcine Arfa ity? Gadra nandositra efa nomelohan’ny Fitsarana Malagasy ary karohan’ny Fitsarana sy ny fitondrana frantsay ve dia afaka mitafa (na an-tariby aza) amin’ny hainoamajery? Mampametra-panontaniana ihany izany tranga izany ary tokony hisy adihevitra mihitsy satria mety azo ampangaina ho firaisana tsikombakomba. Tsy voafaritra mazava tsara intsony tokoa mantsy hoe hatraiza ilay fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety indraindray kanefa heverina fa tokony hisy fetrany tahaka ny zavatra rehetra izany. Azon’ny mpanao gazety natao ve ohatra ny niresaka an-tariby an-kalalahana tamin’i Ben Laden sy namoaka lahatsoratra mifandraika amin’izany taorian’ireny 11 Septambra ireny? Ohatra faharoa, raha misy ve mpanao gazety Malagasy mitafa an-tariby amin’ireo mpanao kidnapping teratany Karana mizaka zom-pirenena frantsay dia hipetra-potsiny ve ny ambasady frantsay, mbola tafiditra ao anatin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ihany ve izany?
Tsy sanatria manankiana na manameloka ireo hainoamanjery vahiny izay nitatitra ny resaka an-tariby nataon’izy ireo tamin’i Houcine Arfa akory fa mba lasa ihany ny eritreritra manao hoe : « ahoana ary izany? ». Gadra nandositra nikotrika zava-doza teto amin’ny firenena ary karohana maneran-tany indrindra ao Frantsa dia mifandray an-tariby amin’ny hainoamanjery vahiny ary mamoaka izao resaka rehetra izao! Nampihomehy mihitsy aza satria tsy fantatr’izy ireo akory hoe « tsy any atsinanan’i Madagasikara no misy ny lakandranon’i Mozambika”!
Nihaona tamin’ireo mpandraharaha ara-toekarena eto Madagasikara, vahiny sy Malagasy, izay mivondrona eo anivon’ny Groupement des Entreprises de Madagascar na ny GEM, ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton Anosy. Fihaonana nisian’ny ...Tohiny